ကငျဆာဖွဈနမှေနျး ဘယျလိုသိနိုငျမလဲ - OnDoctor
By Ei Cho Dr.	 On Dec 21, 2018 Last updated Mar 6, 2019
လူအများစုသည် မိမိခံစားနေရသောရောဂါ ရက်အတန်ကြာသည်အထိ မပျောက်ခဲ့သော် ကင်ဆာ လား?ဆိုသော စိုးရိမ်စိတ်ကဝင်လာတတ်ပါတယ်။ထို့အတူ ကင်ဆာ ဟုတ်မဟုတ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုသော မေးခွန်းကိုမေးကာ အဖြေကိုအတိအကျလိုချင်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်
-ကင်ဆာဆိုတာ ဘယ်လိုရှာဖွေစမ်းသပ်မူ ပြုလုပ်ရင်သိမလဲ?
ကင်ဆာလို့ အတိအကျပြောဖို့က စမ်းသပ်စစ်ဆေးမူတစ်ခုတည်းလုပ်ရုံနဲ့မရပါ။လူနာတစ်ယောက်အတွက်ရောဂါရာဇဝင်။လက်တွေ့စမ်းသပ်မူနှင့် ရှာဖွေစမ်းသပ်မူများလိုအပ်ပါတယ်။ကင်ဆာလား?ကင်ဆာနှင့်တူသောအခြားရောဂါလား ကွဲပြားဖို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမူများစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဆရာဝန်အနေဖြင့် ရောဂါသည်ကင်ဆာလို့ ထင်သည်နှင့် ရှာဖွေစစ်ဆေးမူကို အကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရသည်လည်းရှိတတ်ပါတယ်။တတ်ကျွမ်းနားလည်သည့် ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့်ပူးပေါင်းအဖြေထုတ်ရသည့်အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်။
ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခြင်းဆိုသည်မှာ သွေး။ဆီး။ဝမ်းစစ်ခြင်းအပြင် အခြားသော ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ။ကိုယ်မှထွက်သောအရည် စသည့်တို့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါအခြေအနေနှင့်လူနာအခြေအနေပေါ်မူတည်ရ်ျ လိုအပ်သောစစ်ဆေးမူများအားလုံးပြုလုပ်ပါတယ်။ရောဂါပေါ်မူတည်ရ်ျ Tumor markersလို့ခေါ်တဲ့ကင်ဆာအတွက်လိုအပ်သောစစ်ဆေးမူများလည်း ပြုလုပ်ပါတယ်။
ကင်ဆာတည်နေရာ။အခြေအနေ။အရွယ်အစားနှင့်ပြန့်နှံ့မူရှိမရှိ သိရှိနိုင်စေရန်နှင့် ကုသမူထိရောက်ပုံကိုလည်းသိရှိရန်ပြုလုပ်ပါတယ်။အတ်ထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း။ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ကွန်ပြူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။သံလိုကိဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းစသည့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ကင်ဆာများသည် မှန်ပြောင်းဖြင့် ရောဂါရှာဖွေမူပြုလုပ်ပါတယ်။
ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ရှိသော အကျိတ်။နေရာမှ အသားစကိုယူရ်ျ microscopeဖြင့်ကင်ဆာဆဲလ်များရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့သည် ခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းပြုလုပ်ရသော်လည်း အချို့မူ အလွယ်တကူအသားစစစ်နိုင်ပါတယ်။အသားစစစ်ခြင်းဖြင့်ကင်ဆာလား အခြားရောဂါလား ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
-အရေပြားအသားစယူစစ်ခြင်းစသည့်တို့ကို ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ရ်ျ ရှာဖွေစစ်ဆေးမူပြုလုပ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကင်ဆာဟုတ်မဟုတ်သိနိင်ရန်အထက်ပါစမ်းသပ်မူများပြုလုပ်မှသာ အဖြေထွက်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိရောဂါအခြေအနေ သေချာစစ်ဆေးချက်များမပြုလုပ်ရသေးမှီ ကင်ဆာလားဆိုသောစိတ်ဝေဒနာကို မဖြစ်လာအောင်သတိပြုသင့်ပါတယ်။
လူအမြားစုသညျ မိမိခံစားနရေသောရောဂါ ရကျအတနျကွာသညျအထိ မပြောကျခဲ့သျော ကငျဆာ လား?ဆိုသော စိုးရိမျစိတျကဝငျလာတတျပါတယျ။ထို့အတူ ကငျဆာ ဟုတျမဟုတျ ဘယျလိုသိနိုငျမလဲဆိုသော မေးခှနျးကိုမေးကာ အဖွကေိုအတိအကလြိုခငျြနကွေပါတယျ။ဒါကွောငျ့
-ကငျဆာဆိုတာ ဘယျလိုရှာဖှစေမျးသပျမူ ပွုလုပျရငျသိမလဲ?
ကငျဆာလို့ အတိအကပြွောဖို့က စမျးသပျစဈဆေးမူတဈခုတညျးလုပျရုံနဲ့မရပါ။လူနာတဈယောကျအတှကျရောဂါရာဇဝငျ။လကျတှစေ့မျးသပျမူနှငျ့ ရှာဖှစေမျးသပျမူမြားလိုအပျပါတယျ။ကငျဆာလား?ကငျဆာနှငျ့တူသောအခွားရောဂါလား ကှဲပွားဖို့ စမျးသပျစဈဆေးမူမြားစှာပွုလုပျရနျလိုအပျပါတယျ။ဆရာဝနျအနဖွေငျ့ ရောဂါသညျကငျဆာလို့ ထငျသညျနှငျ့ ရှာဖှစေဈဆေးမူကို အကွိမျကွိမျပွုလုပျရသညျလညျးရှိတတျပါတယျ။တတျကြှမျးနားလညျသညျ့ ပညာရပျပိုငျးဆိုငျရာပညာရှငျမြားနှငျ့ပူးပေါငျးအဖွထေုတျရသညျ့အခွအေနလေညျးရှိပါတယျ။
ဓာတျခှဲစဈဆေးခွငျးဆိုသညျမှာ သှေး။ဆီး။ဝမျးစဈခွငျးအပွငျ အခွားသော ရိုးတှငျးခဉျြဆီ။ကိုယျမှထှကျသောအရညျ စသညျ့တို့စဈဆေးခွငျးဖွဈပါတယျ။ရောဂါအခွအေနနှေငျ့လူနာအခွအေနပေျေါမူတညျရျြ လိုအပျသောစဈဆေးမူမြားအားလုံးပွုလုပျပါတယျ။ရောဂါပျေါမူတညျရျြ Tumor markersလို့ချေါတဲ့ကငျဆာအတှကျလိုအပျသောစဈဆေးမူမြားလညျး ပွုလုပျပါတယျ။
ကငျဆာတညျနရော။အခွအေနေ။အရှယျအစားနှငျ့ပွနျ့နှံ့မူရှိမရှိ သိရှိနိုငျစရေနျနှငျ့ ကုသမူထိရောကျပုံကိုလညျးသိရှိရနျပွုလုပျပါတယျ။အတျထရာဆောငျးရိုကျခွငျး။ဓာတျမှနျရိုကျခွငျး။ကှနျပွူတာဓာတျမှနျရိုကျခွငျး။သံလိုကိဓာတျမှနျရိုကျခွငျးစသညျ့တို့ဖွဈပါတယျ။
အခြို့ကငျဆာမြားသညျ မှနျပွောငျးဖွငျ့ ရောဂါရှာဖှမေူပွုလုပျပါတယျ။
ကငျဆာဖွဈနိုငျရှိသော အကြိတျ။နရောမှ အသားစကိုယူရျြ microscopeဖွငျ့ကငျဆာဆဲလျမြားရှာဖှခွေငျးဖွဈပါတယျ။အခြို့သညျ ခှဲစိတျခနျးအတှငျးပွုလုပျရသျောလညျး အခြို့မူ အလှယျတကူအသားစစဈနိုငျပါတယျ။အသားစစဈခွငျးဖွငျ့ကငျဆာလား အခွားရောဂါလား ခှဲခွားနိုငျပါတယျ။
-အရပွေားအသားစယူစဈခွငျးစသညျ့တို့ကို ရောဂါအခွအေနပေျေါမူတညျရျြ ရှာဖှစေဈဆေးမူပွုလုပျပါတယျ။ထို့ကွောငျ့ကငျဆာဟုတျမဟုတျသိနိငျရနျအထကျပါစမျးသပျမူမြားပွုလုပျမှသာ အဖွထှေကျလာနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မိမိရောဂါအခွအေနေ သခြောစဈဆေးခကျြမြားမပွုလုပျရသေးမှီ ကငျဆာလားဆိုသောစိတျဝဒေနာကို မဖွဈလာအောငျသတိပွုသငျ့ပါတယျ။
Dr.ပြည့်ရှင်းHow to know Cancer